ကွန်ကရစ် စည်ပိုင်းထဲ အနှစ်မြုပ်ခံရတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူလေး "
🌟ဤ ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်း ဆောင်းပါးသည် အလွန် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှသောကြောင့် အသက် ၁၈ နှစ်အောက်အရွယ်များ မဖတ်သင့်ပါ..။🌟
Misato, Saitama Prefecture, Japan.
မီဆတိုဆိုတဲ့မြို့လေးမှာ သိပ်လှတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူမ အသက်က ၁၇ နှစ်....။ သူမ နာမည်က ဂျွန်းကို ဖုရုတ (Junko Furuta) တဲ့...။
ဂျွန်းကို က ရုပ်ပဲချောတာလား...? သိပ်ပြီး လိမ္မာတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပေါ့...။လိမ္မာရုံပဲလား..? သူမဟာ စာလည်းတော်တယ်လေ..။
စာပဲကြိုးစားတာမဟုတ်... ကျောင်းကဖွဲ့စည်းတဲ့ အသင်းအဖွဲ့တော်တော်များများမှာ သူမ မပါရင်မပြီးသလောက်ပါပဲ...အများအကျိုးဆောင်ရွက်တတ်တဲ့သူလေးပေါ့...။
ဆေးလိပ်သောက် ၊ အရက်သောက်၊ ဆေးချ၊ ရည်းစားထား... ဒီလို ကျောင်းသားတွေမလုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်မျိုး တစ်ခုမှမလုပ်...။ ဝါသနာလည်းမပါ.. ။ သူမ ဒါတွေလုပ်ဖို့ အချိန်လည်းမရ...။
ဒါကြောင့် ဂျွန်းကိုဟာ “ငါ့သမီးလေးများဖြစ်ရင် ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်မလဲ..?" ရယ်လို့ မိဘတိုင်း အားကျ ပိုင်ဆိုင်ချင်မိတဲ့ သမီးလိမ္မာလေး တစ်ယောက်ပေါ့...။
အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဝင်လုပ်နေတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူ ဂျွန်းကိုဟာ အဲဒီနေ့က အလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကို စောင့်ရတာ အကြာဆုံးပဲ... အိမ်ပြန်ချင်ပြီ... ညဖက်မြန်မြန်ရောက်ချင်ပြီ...။
ဂျွန်းကိုဟာ အဲဒီနေ့က TV ကလာတဲ့ ဂျပန် အခန်းဆက် ဒရမ်မာကြည့်ဖို့ စိတ်စောနေတာပေါ့....။
အဲဒီနေ့ညက ဒရမ်မာ နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်းပိုင်းလာမယ့်ညလေ...။ သူမ သိပ်ကြိုက်တဲ့ ဒရမ်မာမို့ ဘယ်လိုဇာတ်သိမ်းမှာလဲဆိုတာ သိပ်သိချင်နေပြီး သိပ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေမိတာပေါ့...။
အဲဒီနေ့ဟာ၁၉၈၈ ခုနှစ်ရဲ့ ချမ်းအေးလှတဲ့ ဆောင်းရာသီ- ၁၁ လပိုင်း ၂၂ ရက်နေ့ဖြစ်တယ်။
သူမစောင့်မျှော်နေတဲ့ ည ၈နာရီ ၃၀ မိနစ် ရောက်လာပါပြီ....။
ဂျွန်းကိုဟာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စက်ဘီးလေးကို အမြန်နင်းပြီး အိမ်ပြန်လာတယ်။
စက်ဘီးလေးနဲ့ မိန်းမလှလေး ဂျွန်းကို ကို ပန်းခြံတစ်ခုထဲက လှမ်းမြင်လိုက်တဲ့ မိုက်တိမိုက်ကန်း အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်က သူ့နောက်လိုက်ကျောင်းသားကို ခိုင်းလိုက်တယ်။
" အဲ့ကောင်မ စက်ဘီးကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ပစ်ကွာ!.."
ကျောင်းသားဟာ တစ်ဟုန်တည်းပြေးထွက်လာပြီး စက်ဘီးကို ပြေးကန်လိုက်တယ်...။
စက်ဘီးနင်းလာတဲ့ မိန်းမလှလေး ဂျွန်းကို ဟာ စက်ဘီးပေါ်က ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်လိမ့်ကျသွားတယ်...။
စက်ဘီးကို ကန်လိုက်တဲ့ကျောင်းသားကတော့ ထွက်ပြေးသွားပြီ...။
ဂျွန်းကို စီးလာတဲ့ စက်ဘီးကို ခြေထိုးခံဖို့ ခိုင်းစေလိုက်တဲ့ သူကတော့ သူမ နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် မကောင်းတာမှန်သမျှလုပ်တဲ့ မီယာနို ဟီလိုရှိ (Hiroshi Miyano)ဆိုတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသား တစ်ယောက် ပေါ့...။
သူကလည်း ဂျွန်းကိုနဲ့ တစ်ကျောင်းတည်း တက်နေတာပါပဲ..။
မီယာနိုဟာ အဲဒီမြို့မှာ ယခူဇာလက်သစ် လိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသား လူမိုက် အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်နေတာပေါ့...။
အိုခုရာ ဂျို ( Jō Ogura) ဆိုတဲ့ကျောင်းသားက ဒုတိယ ခေါင်းဆောင်..။
ဂျွန်းကိုရဲ့ စက်ဘီးကို ပြေးကန်ခဲ့တဲ့ မီနာတို ရှင်းဂျိ( Minato Shinji) နဲ့ ဝါထာနာဘဲ ယာဆုရှိ ( Yasushi Watanabe) တို့ နှစ်ယောက်က နောက်လိုက်ပေါ့...။
(ပထမခေါင်းဆောင် မီယာနို နဲ့ နောက်လိုက် မီနာတို နာမည်ချင်းဆင်နေလို့ နောက်လိုက် တပည့် မီနာတိုကို ‘ N ‘ လို့ သတ်မှတ်ပြီး ဆက်ရေးပါမယ်)
ခေါင်းဆောင် မီယာနိုနဲ့ အပေါင်းအပါတွေဟာမကောင်းတာမှန်သမျှ အကုန်လုပ်တဲ့အပြင် အဲဒီအရွယ် ၁၇ နှစ်မှာ မိန်းကလေးတွေကိုပါ မုဒိမ်းကျင့်ဖူးနေပြီ..။
ဂျွန်းကိုက ချောလည်းချော .. ကျောင်းမှာ နာမည်လည်းကြီးတော့ မျက်စိကျနေတာကြာပေါ့...။..တကယ်ချစ်မိတာမျိုး မဟုတ်...။မီယာနိုက ခဏ အပျော်တွဲ ချင်လာတယ်။
"ဟေ့ ဂျွန်းကို..ငါနဲ့ ရည်းစားဖြစ်ကြရအောင်..." လို့ပြောဖူးတယ်။
"ဟင့်အင်း.." လို့ ဂျွန်းကိုကလည်း မဆိုင်းမတွ ငြင်းဖူးတယ်။
ယာခူဇာဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီး ဘဝင်မြင့်နေတဲ့လူမိုက် မီယာနိုဟာ သူလိုချင်တာ ဘာမဆို ရနိ်ုင်တယ်လို့ ထင်နေတာပေါ့... ၊
ဒီလို ထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့ လူမိုက် မီယာနိုဟာ ဂျွန်းကိုရဲ့ ငြင်းဆိုမှုကိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက် အတော့်ကို ဒေါသဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
အခုတော့ ဂျွန်းကို သူ့ရှေ့မှာ မှောက်ရက်လဲနေပြီ.... ။ ည ၈:၃၀ ဆိုတော့ မှောင်နေပြီလေ..။
မီယာနိုဟာ ဂျွန်းကိုရဲ့ စက်ဘီးကို ခြေထောက်နဲ့ ကန်ပစ်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတဲ့ N ကို ကြည့်လိုက်တယ်...
"မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဒီလိုစော်ကားတာ ဘယ်ကောင်းမလဲ..အတော် ဆိုးတာပဲကွာ.. " .., လို့ရေရွတ်ရင်း ဂျွန်းကို ဆီလျှောက်လာတယ်..။
"ဟာ... ဒီကောင်... စောစောကပဲ ငါ့ကိုလည်း ဓားနဲ့ခြိမ်းခြောက် သေးတယ်... ဒီကောင်ပြန်လာမယ်ထင်တယ်... ကဲကဲ..ထ.. ငါ နင့်အိမ်လိုက်ပို့ပေးမယ်..."
ဂျွန်းကို နေတဲ့အိမ်ရောက်ဖို့ ၁၀ မိနစ်အလို... မီယာနိုက ကားဂိုဒေါင် အပျက်ကြီးထဲ ဂျွန်းကို ကို ရုတ်တရက် ဆွဲသွင်းသွားပြီး...
" နင့်ကို ငါ့လှို့ဝှက်ချက်ပြောပြမယ်.. ငါ ယခူဇာအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ပဲ...အထက်က နင်နဲ့ နင့်မိသားစု ကိုသတ်ဖို့ အမိန့်ပေးထားတယ်.. ငါ...နင့် သနားလို့ အခုအထိ မသတ်သေးတာ.."
ဂျွန်းကိုဟာ အလွန်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ သူမ ကြားဖူးတာက ယာခူဇာ ဆိုတာ သိပ်ပြီး ကြမ်းကြုတ် ရက်စက်တယ်ဆိုပဲ...။
"ငါ့ မိသားစုကိုတော့ အသက်ချမ်းသာပေးပါဟာ.."
"နင့် မိသားစု အသက်ချမ်းသာရာ ရချင်ရင်.. အခု ငါနဲ့ တစ်ခါအိပ်....နင့်မိသားစုကို ဘာမှမလုပ်ဖို့ ငါပြောပေးမယ်.. ဘယ်လို သဘောရလဲ...?"
မီယာနိုဟာ ဂျွန်းကို ကို ဂိုထောင်နောက်က လူမနေတဲ့အိမ်ထဲအထိ ဆွဲသွင်းပြီး အဓမ္မကျင့်လိုက်တယ်။
" ယာခူဇာတွေ စောင့်နေနိုင်သေးတယ်... စိတ်မချရသေးဘူး...နင် ငါ့နောက်လိုက်ခဲ့ .. အော်ရင် သတ်ပစ်မယ်.. ငါ့သူငယ်ချင်းတွေ ပန်းခြံထဲမှာ စောင့်နေတယ်..နင် အော်လိုက်တာနဲ့ နင့်မိဘတွေ သေပြီမှတ်...."
စောစောက ပန်းခြံထဲပြန်ရောက်လာတယ်...။မီယာနိုဟာ သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်ဆီ ဂျွန်းကို ကိုတွန်းပို့လိုက်တယ်။
အဲဒီ ၃ ယောက်က ဂျွန်းကို ကို အဓမ္မထပ်ကျင့်ပြန်တယ်...။
ပြီးတော့ မီယာနိုဟာ ဂျွန်းကို ကို တပည့် N ရဲ့ အိမ်ကိုဖမ်းချုပ်ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။
N နေတဲ့အိမ်က ၂ ထပ်အိမ်... မိဘတွေက အိမ်အောက်မှာနေတယ်...။N နဲ့ N ရဲ့ အစ်ကိုက အိမ်ပေါ်ထပ်မှာ တစ်ခန်းစီနေတယ်။
N ရဲ့ မိဘတွေက ဂျွန်းကို ကို အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်လာတာကိုတွေ့တော့...
"မိန်းကလေးက ဘယ်သူလဲ...? နောက်ကျနေပြီ.. ကလေးမကို အိမ်ပြန်ပို့.." လို့ပြောပေမဲ့ N က ဂရုတောင်မစိုက် ဂျွန်းကို ကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်သွားတယ်။
သူတို့ဟာ ဂျွန်းကို ကို အိမ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ ရုတ်တရက် စတင်နှိပ်စက် ရိုက်နှက်ကြတော့တယ်။
အိမ်ပြန်ခွင့်မရတဲ့ သူမဟာ သူမ ကြည့်ချင်တဲ့ ဒရမ်မာနဲ့လွဲခဲ့ရပြီ...။ အဲဒီနေ့ကစပြီး ဂျွန်းကို ဟာ သူတို့လေးယောက်ရဲ့ အဓမ္မကျင့်တာကို ခံရရုံမက စိတ်ကြိုက် နှိပ်စက်ရိုက်နှက်တာကိုပါ ခံရရှာတော့တယ်။
၁၁ လပိုင်း ၂၈ ရက်နေ့.....
အသံထွက် အော်လို့မရအောင် ဂျွန်းကိုရဲ့ မျက်နှာကို စောင် ၊ ခေါင်းအုံးတွေနဲ့ဖိထားပြီး ခြေတွေလက်တွေကို တုပ်နှောင်လိုက်ကြတယ်။
ပြီးတော့ ခေါင်းဆောင် မီယာနို ဟာ သိသမျှ ယောက်ျား အပေါင်းအသင်းတွေခေါ်လာပြီး ဂျွန်းကို ကို မုဒိမ်းကျင့်ခိုင်းတော့တယ်။
၁၁ လပိုင်း ၃၀ ရက်....
ဂျွန်းကိုမိဘတွေက ရဲစခန်းမှာ လူပျောက်တိုင်ပြီး အပူတပြင်းလိုက်ရှာနေကြပြီ...။
မီယာနိုနဲ့ အပေါင်းအပါတွေဟာ ဂျွန်းကိုရဲ့ မိဘတွေကြောင့် ရဲစခန်းက သူတို့အိမ်ကို လာရှာမှာကို စိုးရိမ်လာတယ်။
သူတို့ ဂျွန်းကို ကိုအဝေးတစ်နေရာခေါ်သွားကြတယ်...။
"အမေ သမီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ရှိနေတယ်.. ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့နော်..အားလုံး အဆင်ပြေတယ်...” ...လို့ အတင်းအကြပ်စေခိုင်း ပြောဆိုစေတယ်။
အဲဒီအချိန် N ရဲ့မိခင်ဟာ သားတွေရဲ့အခန်းကို သန့်ရှင့်ရေးလုပ်ရင်း မိန်းကလေး ဓမ္မတာလာရင်သုံးတဲ့ ပစ္စည်းတွေတွေ့သွားတယ်..။
" ဟို ညကမိန်းကလေး ဒီနေ့အထိရှိသေးတယ် ထင်တယ်.."
အဲဒီနေ့ ညက N ပြန်လာတော့ N ရဲ့မိခင်က " သား မိန်းကလေး ပြန်မပို့သေးဘူးလား..?
" ပို့လိုက်ပြီ" N ရဲ့အမေက မယုံလို့ နောက်တစ်နေ့တက်ကြည့်ပြန်တယ်။ ဂျွန်းကို ကို တွေ့သွားတယ်..။
မီယာနိုဟာ ဂျွန်ကို ကို N ရဲ့ရည်းစားယောင်ဆောင်ခိုင်းထားတယ်..။
N နဲ့သူမ ထမင်းအတူစားပြီး ဂိမ်းကစားနေကြတယ်...။ မိဘတွေကိုယ်တိုင်က N ကိုကြောက်ရတယ်.. ဘာမှ မပြောရဲဘူး..။
ဘေးအခန်းက N ရဲ့အစ်ကိုကလည်း ဒါတွေအကုန်သိပေမဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေခဲ့တယ်။ N ရဲ့အစ်ကိုက သူ့ညီနဲ့အပေါင်းအပါတွေကို သေလောက်အောင်ကြောက်တယ်လေ..။
N ရဲ့အမေဟာ ဂျွန်းကို ဆီက ဖုန်းနံပါတ်တောင်းပြီး ဂျွန်းကိုရဲ့ မိဘတွေဆီဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်။
" ဂျွန်းကိုဆိုတဲ့ မိန်းကလေး ရှိပါသလား..?"
"ဂျွန်းကို ဘယ်မှာရှိလဲ သိရင်ပြောပြပါရှင်.."
N ရဲ့အမေဟာ ဖုန်းချပစ်လိုက်တယ်.. အခုတော့ သူရဲ့ သား N ဟာ ဂျွန်းကို ကို ပြန်ပေးဆွဲထားပြီဆိုတာ ရိပ်မိသွားပြီပေါ့...။
N ရဲ့အမေဟာ ဂျွန်းကို ကိုထွက်ပြေးလို့ရအောင် ကူညီခဲ့တယ်။
" ကလေးမ...ထွက်ပြေး... ပြေး..."
ဂျွန်းကို တစ်ခါတည်း ထွက်ပြေးတော့တယ်။
အိမ်အောက်ထပ် အထိပြေး လမ်းပေါ်လည်းရောက်ရော... N နဲ့ N ရဲ့အစ်ကို နဲ့တန်းတိုးတော့တာပဲ...။
ဒီလိုနဲ့ ဂျွန်းကိုဟာ ကံဆိုးစွာနဲ့ ထပ်အဖမ်းခံရပြန်တယ်။
N ဟာ မိဘတွေအိပ်တဲ့အထိ ဂျွန်းကို ကို အိမ်အပြင်မှာ ဖမ်းထားပြီး မိဘတွေအိပ်တော့ တိတ်တဆိတ် အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ခဲ့ပြန်တယ်။
အဲဒီနေ့က စပြီး ပိုဆိုးတော့တယ်........်။
သူတို့ ဂျွန်းကို ကို လူသားတစ်ယောက်လို မသတ်မှတ်ကြတော့ဘူး။ မုဒိမ်းကျင့် ရိုက်နှက်တာတွေ အရင်ကထက် ပြင်းထန်လာတော့တယ်။
ဂျွန်ကိုဟာ တစ်နေ့ ၁၈ နာရီ အဓမ္မကျင့်ခံရတယ်...အနှိပ်စက်ခံရတယ်....။
"ကျွန်မကို အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါ.. ကျွန်မ နာကျင်လှပါပြီ..."
ရေဒီယိုထဲက သူမ အကြိုက်ဆုံး ဒရမ်မာထဲက သီချင်းမကြာခဏလာတယ်..။ အဲဒီသီချင်းလာရင် သူမ မျက်ရည်တွေနဲ့ လိုက်ဆိုမိတယ်...
" အားတင်းထား... အားတင်းထား..."
ပထမ သူမကို ဖမ်းလာခဲ့တုန်းက သူမဆီမှာ နေ့စားလုပ်အားခ ယန်း ၃၀၀၀ ပါလာတယ်။
မီယာနိုနဲ့ အပေါင်းအပါတွေဟာ အဲဒီငွေနဲ့ စားကြသောက်ကြ ... ဂျွန်းကို ကိုလည်း ထမင်းကျွေးကြတယ်...။ အဲဒီငွေကုန်သွားတော့ သူမကို မကျွေးမွေး ကြတော့ဘူး...။
N ရဲ့အစ်ကိုက လူလစ်ရင် ဂျွန်းကို ကို စားစရာတွေယူလာပြီးကျွေးပေမဲ့ သူမ သိပ်မစားနိုင်ရှာတော့ဘူး။
သူမ သွားတွေလည်း ကျိုးကုန်ပြီ.. အူ၊ အစာအိမ်တွေလည်း ထိုးနှက်ဒါဏ်ရာတွေနဲ့ အတွင်းကြေ ကြေနေပြီလေ...သူမ နွားနို့လောက်ပဲ သောက်နိုင်တော့တယ်။
ဒီဇင်ဘာလ လဆန်းပိုင်းမှာ သူမဟာ N ရဲ့အိမ်က ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပြန်တယ်။
ဒါပေမဲ့ သူမမှာ အင်္ကျီက မရှိ ကိုယ်တုံးလုံး....။ ဒီအိမ်ရောက်ကတည်းက သူမ အင်္ကျီ ဝတ်ခွင့် မရတာများတယ်...။
သူမဟာ အပြင်အထိထွက်ဖို့ အခွင့်မသာတော့ ရဲစခန်းကို ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။
"ရဲစခန်းကလား..? ကျွန်မကို ကယ်ပါ..".... မီယာနိုက N အိမ်မှာရှိနေတယ်။
မီယာနို နိုးလာပြီး ဖုန်းကိုဆွဲလုလိုက်ပြီး ဖုန်းချလိုက်တယ်...။ရဲတွေက ချက်ချင်းဖုန်းပြန်ဆက်တယ်။
မီယာနိုက " ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း နောက်တာပါ.. " ...။ အသုံးမကျတဲ့ရဲတွေကလည်း ယုံခဲ့တယ်။
ဂျွန်းကို ပိုပြီး ကံဆိုးပြီ...။မီယာနိုတို့ အဖွဲ့ဒေါသကြီးကုန်ကြပြီလေ...။
အားနည်းနေတဲ့ ဂျွန်ကို ကို သူတို့ရှိသမျှအားတွေနဲ့ ရိုက်နှက် လိုက်ကြတယ်။
ရိုက်လို့အားမရ သူမ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တက်ပြီး ခုန်ကြတယ်။ အားမရတော့ အလေးတုံးတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ကြတယ်။
ဝါးခြမ်းပြားနဲ့ ရိုက်ကြတယ်။ အားမရတဲ့အခါ ဂေါက်ရိုက်တဲ့ အတံနဲ့ ရိုက်ကြပြန်တယ်။
ဆေးလိပ်မီးနဲ့ တို့ကြတယ်..။ ဆေးလိပ်မီးနဲ့တို့တာ အားမရတော့ သူမ ခန္ဓာကိုယ်ကို မီးခြစ်ထဲထည့်တဲ့ ဆီတွေစွတ်ပြီး မီးရှို့လိုက်တယ်။
မိန်းမငယ်ဂျွန်းကိုဟာ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ခံရလေပြီ...။
မီးလောင်ဒါဏ်ရာက သွေးတွေ ပြည်တွေထွက်လာပြီး တစ်ကိုယ်လုံးရွံစရာကောင်းလာတေယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ဟာ ပလပ်စတစ်လက်အိတ်စွပ်ပြီး ဆက်ရိုက်ကြတယ်။
အစာကျွေးမယ့်အစား သူမကို စက္ကူခွက်ထဲ မှာ ကျင်ငယ်ရည်ကို စွန့်ခိုင်းပြီး ပြန်သောက်ခိုင်းတယ်။ သူတို့ကျင်ငယ်ရည်တွေနဲ့လည်း ပက်ဖြန်းကြတယ်..၊
မိယာနိုနဲ့အပေါင်းအပါတွေဟာ ဂျွန်းကို အရှေ့မှာ မိမိကိုယ်ကိုယ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပြီး ထွက်လာတဲ့ သုတ်ရည်တွေကို သူမပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး မြိုချခိုင်းတယ်။
ဗိုက်ဆာတယ်ဆိုရင် သူမခန္ဓာကိုယ်က ထွက်နေတဲ့ သွေးပုတ် ပြည်ပုတ်တွေစားခိုင်းတယ်..။ ဆေးလိပ်တွေ တစ်ခါတည်းနဲ့ ၅ လိပ် တစ်ပြိုင်နက်သောက်ခိုင်းတယ်...။ အရက်တွေ အတင်းတိုက်တယ်။
သူမ ဗိုက်ဆာတယ် မပြောရဲတော့ဘူး။ နာကျင်လွန်းလို့ ဗိုက်လည်း မဆာနိုင်တော့ပါဘူး။
၁၂ လပိုင်း ၅ ရက်နေ့ တိုကျိုမှာ ရထားမီးလောင်မှုကြီးဖြစ်တယ်။ လူတွေအများကြီးသေတယ်။
ဒုတိယခေါင်းဆောင် အိုခုရာ က " ဂျွန်းကို သတင်းကြည့်စမ်း.. ရထားမီးလောင်တာ နင့်အဖေ သေပြီတဲ့ .."
မိဘတွေ အသတ်မခံရအောင် ဒီလို သေလုမြောပါး အနစ်နာခံနေတယ်လို့ စိတ်တစ်ခုထဲနဲ့ ဖြေသိမ့်နေရတဲ့ဂျွန်းကိုဟာ အလွန်ပဲ ဝမ်းနည်း ငိုကြွေးတော့တယ်။
ဒါကို သူတို့က သဘောကျတယ်...။ ပြီးတော့ ခဏအကြာ " ဟားဟား ငါတို့လျှောက်ပြောတာ.. "
သူတို့ဟာ ဂျွန်းကို ကို တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘယ်လို ရိုက်နှက်ရမယ်...စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ရမလဲလို့ပဲတွေးနေကြတာပေါ့..။
ဒီလိုနဲ့ ဂျွန်ကိုဟာ လမ်းတောင်မလျှောက်နိုင်တော့ဘူး။
" အိမ်ပြန်ချင်ရင် ငါတို့ကို က ပြ...။"
ဂျွန်းကိုက အားယူပြီး မရ ရ အောင်ကုန်းရုန်း ထပြီး က ပြရှာတယ်....။ ဒါပေမဲ့ မတ်တပ်မရပ်နိုင် ပစ်လဲသွားတော့ သူတို့အတွက် ရယ်စရာပေါ့...။
သူတို့ ၄ ယောက်ဟာ ဂျွန်းကို ကို တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးနိုင်အောင် ကြံစည် နှိပ်စက်တော့တယ်။
သူမရဲ့ မိန်းမအင်္ဂါနဲ့ အညစ်အကြေးစွန့်အင်္ဂါတွေထဲမှာ မီးပန်းတွေတပ်ပြီးမီးရှို့ကြ...အမှိုက်တွေထိုးထည့်....တွေ့ သမျှ အချွန်ပစ္စည်းတွေ ထိုးထည့် ..နောက်ဆုံး ပုလင်းတွေ ထိုးထည့် ပြီး ပုလင်းတွေကွဲတဲ့အထိ ဗိုက်ပေါ်တက်ခုန်ကြတယ်။
ပလာယာနဲ့ အသားတွေကို တစ်စစီ ဆွဲဖြဲကြတယ်။
ကတ်ကြေး တွေနဲ့ထိုး၊ စတီးချောင်းတွေနဲ့ရိုက်... သူတို့ အကြံရသမျှ နည်းမျိုးစုံနဲ့ နှိပ်စက်ကြတယ်။
ပျင်းရင် သူမ ကိုယ်ကို ထုတ်တန်းမှာ တွဲလောင်းချပြီး လက်ဝှေ့ထိုးကြသေးတယ်။
ဂျွန်းကိုဟာ အကြိမ် ၄၀၀ ထက်မနည်း မုဒိမ်းကျင့်ခံခဲ့ရပါ တယ်။ အခုတော့ ရွံစရာကောင်းနံစော်နေတဲ့ သွေးအလိမ်းလိမ်း မလှမပကြီးဖြစ်နေပြီလေ...။
မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ထက် နှိပ်စက်ဖို့ပဲ အသုံးဝင်တာပေါ့...။
ဖူးရောင်နေတဲ့ မျက်နှာပေါ် ဖယောင်းစက်တွေချပြန်တယ်...။
ဆောင်းရာသီကြီး ဝရန်တာမှာထုတ်ထား၊ အေးလားလို့ မေး... အေးတယ်ဖြေရင် တစ်ကိုယ်လုံး ဆီစွတ် မီးထပ်ရှို့...။
"ကျွန်မကို သတ်ပေးပါရှင်.. တောင်းပန်ပါတယ်.."
ဘဝကို အရှုံးပေးလိုက်ပြီ...သူမ အသက်မရှင်လိုတော့ပြီ..။
မီယာနိုဟာ ဂျွန်းကို ကို ဒီလို အိမ်ထဲထည့်နှိပ်စက်တာကို လူ အယောက် ၁၀၀ ကျော် သိနေတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှ ဘာမှ မပြောရဲဘူး။ သူမကို ကယ်မယ့်သူ တစ်ယောက်မှ မရှိခဲ့ဘူး...။
၁၉၈၉ ခုနှစ် ၁ လပိုင်း ၄ ရက်
မီယာနိုဟာ အပြင်မှာ ယန်း တစ်သိန်းပျောက်သွားတယ်။ စိတ်တိုတိုနဲ့ အပြစ်မရှိတဲ့ ဂျွန်းကို ကို ရိုက်နှက်တယ်။
ဂျွန်းကိုဟာ သူမရဲ့ခါင်းနဲ့ ကက်ဆက် စပီကာနဲ့ ဆောင့်ပြီး သတိလစ်သွားတော့တယ်။
ဘာမှမတုန့်ပြန်တဲ့သူမကို ၆ ကီလိုလေးတဲ့ အလေးမတုံးတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်တယ်။ သူမက တုတ်တုတ်မှမလှုပ်...။
"ကောင်မ .. သရုပ်ဆောင်ကောင်းလှချည်လား..." ဆိုပြီး သူမကို မီးရှို့ပြန်တယ်။
သတိပြန်လည်လာတယ်။ နောက်ထပ် ၂ နာရီခန့် ထပ်ရိုက်နှက်ပြန်တယ်။ ဂျွန်ကို သေဆုံးသွားတယ်။
သူမ N ရဲ့အိမ်မှာ ငရဲကျခဲ့တာ အားလုံး ၄၄ ရက်ပေါ့ ... အခုတော့ ငရဲသားဘဝက လွတ်မြောက်ခဲ့ရပြီလေ...။
၁၉၈၉ ခုနှစ် ၁ လပိုင်း ၅ ရက်
သေဆုံးသွားတဲ့ ဂျွန်းကို ကိုကြည့်ပြီး မီယာနိုနဲ့ အပေါင်းအပါတွေဟာ ရယ်ချင်ရက် ပက်ကျိဖြစ်သွားကြတယ်။
သူတို့ဟာ တိုင်ပင်မထားပဲ ပြိုင်တူ အော်ဟစ်ရယ်မောလိုက်ကြတယ်။
ဂျွန်းကိုရဲ့အလောင်းကို စောင်နဲ့ပတ်၊ ခရီးဆောင်အိတ်အထဲ ထည့်၊ ပြီးတော့ အဲဒီအိတ်ကို ဘိလပ်မြေဖျော်တဲ့ စည်ပိုင်းထဲထည့်ပြီး ဘိလပ်မြေတွေလောင်းချပစ်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ တိုကျိုမြို့ လမ်းဘေး တစ်နေရာ နေရာမှာသွားပစ်ထားလိုက်တယ်။
သူတို့အုပ်စုဟာ အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့်မှုနဲ့ အဖမ်းခံရပြန်တယ်။
ထောက်လှမ်းရေးက "မင်းအရွယ် နဲ့ လူသတ် မုဒိမ်းကျင့် အကုန်လုပ်နေတာ မင်းကို ဒီအတိုင်းပစ်ထားလို့မရတော့ဘူး..." ..လို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ပြောလိုက်တယ်။
"ဘာ! ဟိုကောင်တွေသစ္စာဖောက်ပြီ... ဂျွန်းကို ကိုကျုပ်တစ်ယောက်ထဲသတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ...!"
ထောက်လှမ်းရေးက အတော်အံသြသွားတယ်။ ချက်ချင်း အမူအရာမပျက် ပြန်ထိန်းပြီး..
"အေး ဘယ်လိုသတ်ခဲ့လဲ ဖြောင့်ချက်ပေး.. လိမ်ရင် ပိုဆိုးမယ်..."
ထောက်လှမ်းရေးတို့ အလောင်းကို စစ်ဆေးကြည့်တော့... မကြည့်ရဲလောက်အောင် ရက်စက်ထားတာတွေ့ရတယ်။
ဂျွန်းကိုရဲ့ ရင်သားတွေမှာ အပ်တွေ အများကြီးစိုက်ထားတယ်။
သွားတွေ တစ်ချောင်းမှမရှိတော့ ......
အစာအိမ်ထဲကို စစ်ဆေးကြည့်တော့ အစားအစာတွေအစား ကျင်ငယ်ရေ၊ သုတ်ရေ၊ ပိုးဟတ်တွေပဲ ရှိနေတယ်။
မျက်နှာက အရိုးတွေအကုန်နီးပါး ကျိုးနေတယ်။ဆံပင်တွေ အကုန်ကျွတ်နေတယ်။
ဆရာဝန်က သူမဟာ မသေခင်က နားတွေလည်း ကန်းနေခဲ့တယ်လို့ မှတ်ချက်ချတယ်...။
ကိုယ် အလေးချိန် ၅၅ ကီလိုရှိခဲ့တဲ့ ကျမ်းကျမ်းမာမာ မိန်းမငယ်လေးဟာ သေဆုံးသွားတဲ့အခါ ၃၅ ကီလိုပဲရှိခဲ့တယ်။
၁၉၉၀ ခုနှစ် ၇ လပိုင်း......
ခံပြင်းဖို့ကောင်းတာက ဒီလို လူသားတစ်ယောက်ကို လူမဆန် နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ သူတို့ ၄ ယောက်ဟာ အသက်မပြည့်သေးတဲ့အတွက်.....
အသက်မပြည့်ဆိုးသွမ်းလူငယ် ဥပဒေ အရ (juvenile law ) ပြင်းထန်တဲ့ ထောင်ဒါဏ်ပေးခြင်းမခံခဲ့ရဘူး။
၁။ မီယာနို - Hiroshi Miyano- ၂၀ နှစ်
၂။ N- Shinji Minato- ၅နှစ် မှ ၉ နှစ်
၃။ အိုဂုရ- Jo Ogura- ၈ နှစ် ( အခြား လူရိုက်မှု တစ်မှုနဲ့ နှစ်မှုပေါင်း အပြစ်ဒါဏ်)
၄။ ဝါတနဘဲ- Yasushi Watanabe- ၅ နှစ်မှ ၇ နှစ်
....လို့ နောက်ဆုံး အမြင့်ဆုံးတရားရုံးက သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ အခြားကျောင်းသား ၁၀ ယောက်လောက်ကိုလည်း မုဒိမ်းမှုနဲ့ အရေးယူခဲ့တယ်။
N မိဘတွေကတော့ ဂျွန်းကို ကို သူတို့ သား N ရဲ့ရည်းစားလို့ ထင်ခဲ့ကြောင်း...။ ဒါပေမဲ့ လွတ်မြောက်ဖို့ ကူညီခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း မသိခဲ့ပါဘူးလို့ အလျှောက်ကောင်းခဲ့လို့ ထောင်ထဲမဝင်ခဲ့ရဘူး...။
တရားခွင်မှာ သူတို့ဖြောင့်ချက်ပေးတိုင်း ကြားနာရပြီး မူးမေ့လဲကျသွားခဲ့တဲ့ ဂျပန်ပြည်သူတွေအတော်များများရှိခဲ့တယ်။
ငိုယိုကြတာတော့ မပြောနဲ့ ... တရားရုံးမှာ တကယ့်ငိုပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။
မီယာနိုလည်း နောက်ဆုံး ထောင်ထဲဝင်ခါနီး ခြုံးပွဲချငိုလိုက်တယ်...
" ကံမကောင်းလို့ အဖမ်းခံရတာ.. အလောင်းကို ပင်လယ်ထဲပစ်လိုက်ရမှာ..ငါ ညံ့ခဲ့တယ်..."...တဲ့...။
အခုတော့ သူတို့ ၄ ယောက်လွတ်လာပြီပေါ့...။
မီယာနို - Hiroshi Miyano
သူဟာ ထောင်ကထွက်လာပြီး သူ့နာမည်ကို Hiroshi Yokoyama လို့ပြောင်းလိုက်တယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ လိမ်လည်မှုနဲ့ ထပ်အဖမ်းခံရပေမဲ့ သက်သေအထောက် အထား မခိုင်လုံတော့ ပြန်လွတ်လာတယ်။
မီယာနို မိဘတွေဟာ ဂျွန်းကို မိဘတွေအတွက် အလွန်ပဲ ဝမ်းနည်းခဲ့တယ်။
သူတို့နေတဲ့ အိမ်ကိုရောင်းပြီး ယန်းပေါင်း သိန်း ၅၀၀ (USD 425,000) ပေးခဲ့တယ်။ ဂျွန်းကို မိဘတွေက လက်မခံခဲ့ပါဘူး။
ထပ်ကာထပ်ကာ တောင်းပန်လိုက် ငွေပို့ဖို့ကြိုးစားလိုက် လုပ်နေခဲ့တယ်။
ဂျွန်းကိုရဲ့မိခင်ကြီးကတော့ စိတ္တဇဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံနေရဆဲ....။ နေကောင်းလိုက် မကောင်းလိုက်ပါပဲ...။
N- Shinji Minato
သူက မီယာနိုထက် ငယ်တယ်။ ထောင်ကျတော့ ၁၆ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ သူ့မိဘတွေဟာ အဲဒီမြို့မှာ မနေရဲတော့လို့ အခြားမြို့ကို ပြောင်းသွားကြတယ်။
သူဟာ ထောင်ကထွက်လာပြီး ရိုမေးနီးယား အမျိုးသမီး (Romanian woman) နဲ့အိမ်ထောင်ကျခဲ့တယ်။
အိုဂုရ- Jo Ogura
သူကတော့ ၁၉၉၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ ထောင်ကထွက်လာပြီး သူ့နာမည်ကို Jō Kamisaku လို့ပြောင်းလိုက်တယ်။
သူဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ Takatoshi Isono ဆိုတဲ့သူကို သူ့ရည်းစားနဲ့ အထင်လွဲပြီး ၄ နာရီလုံးလုံး ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်တဲ့အမှုနဲ့ ထောင် ၇ နှစ်ထပ်ကျတယ်။
"ငါ ... လူသတ်ဖူးတယ်ကွ! မင်းကို ဘယ်လိုသတ်ပစ်ရမလဲဆိုတာ မခက်ဘူး "..လို့ပြောခဲ့သေးတယ်။
တရုတ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် နဲ့ လက်ထပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။
သူ့မိဘတွေကတော့ သူ့သားဘဝပျက်တာ ဂျွန်းကိုကြောင့် ဆိုပြီး ဂျွန်းကိုရဲ့ အုတ်ဂူ ကို သွားရောက် ဖျက်ဆီးခဲ့သေးတယ်။
ဝါတနဘဲ- Yasushi Watanabe
သူကတော့ ထောင်ထဲကထွက်လာပြီး လူကြောက်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာခံစားရတော့တယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ ဘဝမှာ မထင်မှတ်တာတွေ အချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါ ကောင်းတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်သလို ဆိုးတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်...။
"ကွန်ကရစ် စည်ပိုင်းထဲ နစ်မြုတ်နေတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူလေး " ဆိုတဲ့ သတင်းဆိုးဟာ ကမ္ဘာကို တုန်လှုပ်စေခဲ့တဲ့ ....သိပ်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်....။
ကျွန်မတို့ မသိသေးတဲ့ လောကကြီးထဲက တစ်ချို့သော လူတွေမှာ မေတ္တာဆိုတာ မရှိ လောက်အောင် ခေါင်းပါးနေတယ်။ သူတို့ဟာ သင့်နံဘေးမှာထိုင်နေတဲ့သူလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
ကိုယ်ကကောင်းပေမဲ့ ခေါင်းရွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေ လောကကြီးထဲမှာ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေဆဲ....,။
မိမိ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းအောင် မှန်အောင်နေပါစေ....လူယုတ်မာတွေလက်ထဲရောက်သွားတတ်တဲ့ ကံဆိုးတဲ့သူတွေရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာ ဂျွန်းကိုရဲ့ အဖြစ်ဆိုးက သက်သေပါပဲ....။
လူယုတ်မာတွေဟာ သူတို့ ရဲ့ ကိုယ်၊ စိတ် ချမ်းသာဖို့ သားကောင်တွေ အမြဲရှာနေလေ့ရှိတယ်....။
ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကို အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ပြီး စက်ဘီးနဲ့အိမ်ပြန်လာချိန်မှာလဲကြုံတွေ့နိုင်တယ်။
အိမ်ထဲမှာအိပ်နေရင်းလည်း ကြုံတွေ့နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အမြဲ သတိရှိရပါမယ်..။
ကံ ကံ၏ အကျိုးကို ယုံကြည်ပြီး ဝဋ္ဋ်ကြွေးဆိုတာကြောင့် ဒီလိုခံစားရတယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိရင် ဒီဘဝမှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ တတ်နိုင်သလောက် များများ ပြုလုပ်နိုင်ပါမှ... လို့ မိမိကိုယ်မိမိ သတိပေးနိုင်ပါမှ...။
ဒါမှ ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှုတွေ များလာပြီး ဒီလို ဝဋ္ဋ်ကြွေး အဖြစ်ဆိုးကြီးတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်သွားနိုင်သလို ၊ နောက်ဆုတ် အချိန်ဆွဲထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။
၁၉၈၉ ခုနှစ် ၄ လပိုင်း ၂ ရက်နေ့မှာ သူမရဲ့အလောင်းကို မြေမြှုတ်သဂြိုင်္ဟ်လိုက်ပါတယ်။
သူမဟာ မျှော်လင့်ချက်တွေ နဲ့ ပျော်ရွင်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ဖူးတယ်။
သူမ အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ညက သူမ သိပ်မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ ဂျပန် အခန်းဆက် ဒရမ်မာ ဘယ်လိုအဆုံးသတ်လေမလဲ....?
သူမဟာ ကိတ်မုန့်ဖုတ်တာ အရမ်းဝါသနာပါခဲ့တယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက် ခရစ်စမတ်မှာ မိခင်နဲ့ ကိတ်မုန့်ဖုတ်ဖို့ အစီအစဉ်တွေဆွဲထားကြတာ....။
" အမေ အံ့သြသွားမယ်.. သမီးမှာ အကုန် စဉ်းစားထားပြီးသား..."....စိတ်ကူးယဉ် ခရစ်စမတ် ကိတ်လေးလည်း မလုပ်ဖြစ်နိုင်ခဲ့...။
ချမ်းအေးလှတဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ အင်္ကျီမပါ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ယောက်ျားတွေ အာသာပြေ နေပြခဲ့ရရှာတယ်...။
၁၉၈၉ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူးနေ့....သူများတွေ ပျော်နေတဲ့အချိန် သူမမှာတော့ ဘယ်သူက ဘယ်လို လာနှိပ်စက်မလဲ ..? မုဒိမ်းပဲအကျင့်ခံရမလား...မီးပဲအရှို့ခံရမလား.. ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေခဲ့ရတယ်။
ဂျွန်းကို ဟာ ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်တယ်။ သူမ ဟာ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက် မှာသေဆုံးခဲ့တယ်။
သူမအရမ်းမျှော်လင့် စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့ ၁၈ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ မရောက်မှီ ၄ ရက်အလိုမှာ လောကကြီးက နာကျင်စွာနဲ့ ထွက်ခွာခဲ့ရတယ်။
ကျောင်းဆင်းပြီး ည ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ်အထိဘာလို့ အချိန်ပိုင်းလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့သူတွေ မျက်ရည် အလိုလိုစီးကျလာခဲ့ရတယ်...။
ဂျပန်နိုင်ငံတို့ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အထက်တန်းကျောင်းပြီးသွားရင် ဘဝရဲ့ ပထမခြေလှမ်း ပြီးဆုံးတဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ခရီးထွက်ကြတယ်။ အဲဒါကို High School Graduation Trips လို့ခေါ်တယ်။
သူမ အထက်တန်းနောက်ဆုံးနှစ်မို့ စာမေးပွဲပြီးရင်ခရီးထွက်ဖို့ ပိုက်ဆံစုနေတာဖြစ်တယ်။ သူမ မိဘတွေက အကုန်အကျခံပြီး လက်ဆောင်အနေနဲ့ ခရီးထွက်ဖို့ငွေကို ပေးမယ်ဆိုပေမယ့် မချမ်းသာတဲ့ မိဘတွေ ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ရမှာကို သူမ မလိုလားခဲ့.....။
အခုတော့ သူမ အကြာကြီးစောင့်စားခဲ့ရတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ နိုင်ငံခြား ခရီးတစ်ခုခုကိုလည်း မသွားခဲ့ရတော့....။
နောက်ဆုံး ဒီလို အရှင်လတ်လတ် ငရဲကျခံဖို့ လိုက်သွားခဲ့တာလည်း "နင့်မိသားစုကို သတ်ပစ်မယ်..." ဆိုတာကို ကြောက်လွန်းလို့....။
သူမရဲ့အုတ်ဂူ နံဘေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေရေးထားတဲ့ ကျောက်စာလေး ဒီနေ့အထိရှိနေတယ်။
ငါတို့ နင့်ကို ဒီလိုပြန်တွေ့ရမယ်လို့ အိပ်မက်တောင် မမက်ဖူးခဲ့ပါဘူး...။နင် တော်တော် နာကျင် ခံစားခဲ့ရမှာပဲနော်....။
ဒါနဲ့....ဒီနှစ် happi (法被, 半被) ရိုးရာ ပွဲတော်မှာ နင်မရှိတော့ပေမဲ့ ငါတို့ နင့်အစား အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ကြမယ်...။
ငါတို့ နင့်ကိုဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး..သိလား..။
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက နင့်ကို အောင်လက်မှတ်ပေးမယ်တဲ့ဟ...။ ငါတို့ အားလုံး အထက်တန်း အတူတူအောင်ကြပြီပေါ့ဟာ...။
နင်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာ နာကျင်မှုတွေလည်းမရှိ ဝေဒနာခံစားမှုတွေလည်းမရှိတော့တာမို့ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူနေနော်...သူငယ်ချင်း...။
ဂျွန်းကိုရဲ့မိဘတွေဟာ ဂျပန်ပြည်မှာ ဒီလို ယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေရှိနေတာ ပြည်သူ ပြည်သားတွေ သတိထားနိုင်ဖို့ ဒီ သတင်းဆောင်းပါးကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီး ရုံတင်ပြသဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့် ဒီရုပ်ရှင်ကြောင့် သူတို့ ပိုပြီး ဝမ်းနည်းရလို့ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြတယ်။
( မြန်မာပြည်က မောင်နှမတစ်ချို့ တောင်းဆိုထားလို့ ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်..။)
가장 잔인했던 미소녀 여고생 콘크리트 살인사건!!! ㅣ기묘한이야기ㅣ도쿄K짱ㅣ Tokyo Kㅣ
The 44-Day Horror Story Of Junko Furuta By Katie Serena
ကှနျကရဈ စညျပိုငျးထဲ အနှဈမွုပျခံရတဲ့ အထကျတနျးကြောငျးသူလေး "
🌟ဤ ဖွဈရပျမှနျသတငျး ဆောငျးပါးသညျ အလှနျ ရကျစကျကွမျးကွုတျလှသောကွောငျ့ အသကျ ၁၈ နှဈအောကျအရှယျမြား မဖတျသငျ့ပါ..။🌟
မီဆတိုဆိုတဲ့မွို့လေးမှာ သိပျလှတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျရှိတယျ။ သူမ အသကျက ၁၇ နှဈ....။ သူမ နာမညျက ဂြှနျးကို ဖုရုတ (Junko Furuta) တဲ့...။
ဂြှနျးကို က ရုပျပဲခြောတာလား...? သိပျပွီး လိမ်မာတဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျပေါ့...။လိမ်မာရုံပဲလား..? သူမဟာ စာလညျးတျောတယျလေ..။
စာပဲကွိုးစားတာမဟုတျ... ကြောငျးကဖှဲ့စညျးတဲ့ အသငျးအဖှဲ့တျောတျောမြားမြားမှာ သူမ မပါရငျမပွီးသလောကျပါပဲ...အမြားအကြိုးဆောငျရှကျတတျတဲ့သူလေးပေါ့...။
ဆေးလိပျသောကျ ၊ အရကျသောကျ၊ ဆေးခြ၊ ရညျးစားထား... ဒီလို ကြောငျးသားတှမေလုပျသငျ့တဲ့ အလုပျမြိုး တဈခုမှမလုပျ...။ ဝါသနာလညျးမပါ.. ။ သူမ ဒါတှလေုပျဖို့ အခြိနျလညျးမရ...။
ဒါကွောငျ့ ဂြှနျးကိုဟာ “ငါ့သမီးလေးမြားဖွဈရငျ ဘယျလောကျ ကောငျးလိုကျမလဲ..?" ရယျလို့ မိဘတိုငျး အားကြ ပိုငျဆိုငျခငျြမိတဲ့ သမီးလိမ်မာလေး တဈယောကျပေါ့...။
အခြိနျပိုငျးအလုပျဝငျလုပျနတေဲ့ အထကျတနျးကြောငျးသူ ဂြှနျးကိုဟာ အဲဒီနကေ့ အလုပျပွီးတဲ့အခြိနျကို စောငျ့ရတာ အကွာဆုံးပဲ... အိမျပွနျခငျြပွီ... ညဖကျမွနျမွနျရောကျခငျြပွီ...။
ဂြှနျးကိုဟာ အဲဒီနကေ့ TV ကလာတဲ့ ဂပြနျ အခနျးဆကျ ဒရမျမာကွညျ့ဖို့ စိတျစောနတောပေါ့....။
အဲဒီနညေ့က ဒရမျမာ နောကျဆုံးဇာတျသိမျးပိုငျးလာမယျ့ညလေ...။ သူမ သိပျကွိုကျတဲ့ ဒရမျမာမို့ ဘယျလိုဇာတျသိမျးမှာလဲဆိုတာ သိပျသိခငျြနပွေီး သိပျပွီးစိတျလှုပျရှားနမေိတာပေါ့...။
အဲဒီနဟေ့ာ၁၉၈၈ ခုနှဈရဲ့ ခမျြးအေးလှတဲ့ ဆောငျးရာသီ- ၁၁ လပိုငျး ၂၂ ရကျနဖွေ့ဈတယျ။
သူမစောငျ့မြှျောနတေဲ့ ည ၈နာရီ ၃၀ မိနဈ ရောကျလာပါပွီ....။
ဂြှနျးကိုဟာ ပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ စကျဘီးလေးကို အမွနျနငျးပွီး အိမျပွနျလာတယျ။
စကျဘီးလေးနဲ့ မိနျးမလှလေး ဂြှနျးကို ကို ပနျးခွံတဈခုထဲက လှမျးမွငျလိုကျတဲ့ မိုကျတိမိုကျကနျး အထကျတနျးကြောငျးသားတဈယောကျက သူ့နောကျလိုကျကြောငျးသားကို ခိုငျးလိုကျတယျ။
" အဲ့ကောငျမ စကျဘီးကိုခွထေောကျနဲ့ကနျပဈကှာ!.."
ကြောငျးသားဟာ တဈဟုနျတညျးပွေးထှကျလာပွီး စကျဘီးကို ပွေးကနျလိုကျတယျ...။
စကျဘီးနငျးလာတဲ့ မိနျးမလှလေး ဂြှနျးကို ဟာ စကျဘီးပျေါက ဇောကျထိုးမိုးမြှျောလိမျ့ကသြှားတယျ...။
စကျဘီးကို ကနျလိုကျတဲ့ကြောငျးသားကတော့ ထှကျပွေးသှားပွီ...။
ဂြှနျးကို စီးလာတဲ့ စကျဘီးကို ခွထေိုးခံဖို့ ခိုငျးစလေိုကျတဲ့ သူကတော့ သူမ နဲ့ ဆနျ့ကငျြဖကျ မကောငျးတာမှနျသမြှလုပျတဲ့ မီယာနို ဟီလိုရှိ (Hiroshi Miyano)ဆိုတဲ့ အထကျတနျးကြောငျးသား တဈယောကျ ပေါ့...။
သူကလညျး ဂြှနျးကိုနဲ့ တဈကြောငျးတညျး တကျနတောပါပဲ..။
မီယာနိုဟာ အဲဒီမွို့မှာ ယခူဇာလကျသဈ လိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ အထကျတနျးကြောငျးသား လူမိုကျ အုပျစုရဲ့ခေါငျးဆောငျလုပျနတောပေါ့...။
အိုခုရာ ဂြို ( Jō Ogura) ဆိုတဲ့ကြောငျးသားက ဒုတိယ ခေါငျးဆောငျ..။
ဂြှနျးကိုရဲ့ စကျဘီးကို ပွေးကနျခဲ့တဲ့ မီနာတို ရှငျးဂြိ( Minato Shinji) နဲ့ ဝါထာနာဘဲ ယာဆုရှိ ( Yasushi Watanabe) တို့ နှဈယောကျက နောကျလိုကျပေါ့...။
(ပထမခေါငျးဆောငျ မီယာနို နဲ့ နောကျလိုကျ မီနာတို နာမညျခငျြးဆငျနလေို့ နောကျလိုကျ တပညျ့ မီနာတိုကို ‘ N ‘ လို့ သတျမှတျပွီး ဆကျရေးပါမယျ)
ခေါငျးဆောငျ မီယာနိုနဲ့ အပေါငျးအပါတှဟောမကောငျးတာမှနျသမြှ အကုနျလုပျတဲ့အပွငျ အဲဒီအရှယျ ၁၇ နှဈမှာ မိနျးကလေးတှကေိုပါ မုဒိမျးကငျြ့ဖူးနပွေီ..။
ဂြှနျးကိုက ခြောလညျးခြော .. ကြောငျးမှာ နာမညျလညျးကွီးတော့ မကျြစိကနြတောကွာပေါ့...။..တကယျခဈြမိတာမြိုး မဟုတျ...။မီယာနိုက ခဏ အပြျောတှဲ ခငျြလာတယျ။
"ဟေ့ ဂြှနျးကို..ငါနဲ့ ရညျးစားဖွဈကွရအောငျ..." လို့ပွောဖူးတယျ။
"ဟငျ့အငျး.." လို့ ဂြှနျးကိုကလညျး မဆိုငျးမတှ ငွငျးဖူးတယျ။
ယာခူဇာဆိုတဲ့ အဖှဲ့အစညျးနဲ့ အဆကျအသှယျရှိတယျဆိုပွီး ဘဝငျမွငျ့နတေဲ့လူမိုကျ မီယာနိုဟာ သူလိုခငျြတာ ဘာမဆို ရနျိုငျတယျလို့ ထငျနတောပေါ့... ၊
ဒီလို ထငျတိုငျးကြဲနတေဲ့ လူမိုကျ မီယာနိုဟာ ဂြှနျးကိုရဲ့ ငွငျးဆိုမှုကိုခံလိုကျရတဲ့အတှကျ အတေျာ့ကို ဒေါသဖွဈသှားခဲ့တယျ။
အခုတော့ ဂြှနျးကို သူ့ရှမှေ့ာ မှောကျရကျလဲနပွေီ.... ။ ည ၈:၃၀ ဆိုတော့ မှောငျနပွေီလေ..။
မီယာနိုဟာ ဂြှနျးကိုရဲ့ စကျဘီးကို ခွထေောကျနဲ့ ကနျပဈပွီး ထှကျပွေးသှားတဲ့ N ကို ကွညျ့လိုကျတယျ...
"မိနျးကလေးတဈယောကျကို ဒီလိုစျောကားတာ ဘယျကောငျးမလဲ..အတျော ဆိုးတာပဲကှာ.. " .., လို့ရရှေတျရငျး ဂြှနျးကို ဆီလြှောကျလာတယျ..။
"ဟာ... ဒီကောငျ... စောစောကပဲ ငါ့ကိုလညျး ဓားနဲ့ခွိမျးခွောကျ သေးတယျ... ဒီကောငျပွနျလာမယျထငျတယျ... ကဲကဲ..ထ.. ငါ နငျ့အိမျလိုကျပို့ပေးမယျ..."
ဂြှနျးကို နတေဲ့အိမျရောကျဖို့ ၁၀ မိနဈအလို... မီယာနိုက ကားဂိုဒေါငျ အပကျြကွီးထဲ ဂြှနျးကို ကို ရုတျတရကျ ဆှဲသှငျးသှားပွီး...
" နငျ့ကို ငါ့လှို့ဝှကျခကျြပွောပွမယျ.. ငါ ယခူဇာအဖှဲ့ဝငျတဈယောကျပဲ...အထကျက နငျနဲ့ နငျ့မိသားစု ကိုသတျဖို့ အမိနျ့ပေးထားတယျ.. ငါ...နငျ့ သနားလို့ အခုအထိ မသတျသေးတာ.."
ဂြှနျးကိုဟာ အလှနျတုနျလှုပျသှားတယျ။ သူမ ကွားဖူးတာက ယာခူဇာ ဆိုတာ သိပျပွီး ကွမျးကွုတျ ရကျစကျတယျဆိုပဲ...။
"ငါ့ မိသားစုကိုတော့ အသကျခမျြးသာပေးပါဟာ.."
"နငျ့ မိသားစု အသကျခမျြးသာရာ ရခငျြရငျ.. အခု ငါနဲ့ တဈခါအိပျ....နငျ့မိသားစုကို ဘာမှမလုပျဖို့ ငါပွောပေးမယျ.. ဘယျလို သဘောရလဲ...?"
မီယာနိုဟာ ဂြှနျးကို ကို ဂိုထောငျနောကျက လူမနတေဲ့အိမျထဲအထိ ဆှဲသှငျးပွီး အဓမ်မကငျြ့လိုကျတယျ။
" ယာခူဇာတှေ စောငျ့နနေိုငျသေးတယျ... စိတျမခရြသေးဘူး...နငျ ငါ့နောကျလိုကျခဲ့ .. အျောရငျ သတျပဈမယျ.. ငါ့သူငယျခငျြးတှေ ပနျးခွံထဲမှာ စောငျ့နတေယျ..နငျ အျောလိုကျတာနဲ့ နငျ့မိဘတှေ သပွေီမှတျ...."
စောစောက ပနျးခွံထဲပွနျရောကျလာတယျ...။မီယာနိုဟာ သူငယျခငျြး ၃ ယောကျဆီ ဂြှနျးကို ကိုတှနျးပို့လိုကျတယျ။
အဲဒီ ၃ ယောကျက ဂြှနျးကို ကို အဓမ်မထပျကငျြ့ပွနျတယျ...။
ပွီးတော့ မီယာနိုဟာ ဂြှနျးကို ကို တပညျ့ N ရဲ့ အိမျကိုဖမျးခြုပျချေါဆောငျသှားကွတယျ။
N နတေဲ့အိမျက ၂ ထပျအိမျ... မိဘတှကေ အိမျအောကျမှာနတေယျ...။N နဲ့ N ရဲ့ အဈကိုက အိမျပျေါထပျမှာ တဈခနျးစီနတေယျ။
N ရဲ့ မိဘတှကေ ဂြှနျးကို ကို အိမျပျေါချေါတငျလာတာကိုတှတေ့ော့...
"မိနျးကလေးက ဘယျသူလဲ...? နောကျကနြပွေီ.. ကလေးမကို အိမျပွနျပို့.." လို့ပွောပမေဲ့ N က ဂရုတောငျမစိုကျ ဂြှနျးကို ကိုအိမျပျေါချေါတငျသှားတယျ။
သူတို့ဟာ ဂြှနျးကို ကို အိမျပျေါရောကျတာနဲ့ ရုတျတရကျ စတငျနှိပျစကျ ရိုကျနှကျကွတော့တယျ။
အိမျပွနျခှငျ့မရတဲ့ သူမဟာ သူမ ကွညျ့ခငျြတဲ့ ဒရမျမာနဲ့လှဲခဲ့ရပွီ...။ အဲဒီနကေ့စပွီး ဂြှနျးကို ဟာ သူတို့လေးယောကျရဲ့ အဓမ်မကငျြ့တာကို ခံရရုံမက စိတျကွိုကျ နှိပျစကျရိုကျနှကျတာကိုပါ ခံရရှာတော့တယျ။
၁၁ လပိုငျး ၂၈ ရကျနေ့.....
အသံထှကျ အျောလို့မရအောငျ ဂြှနျးကိုရဲ့ မကျြနှာကို စောငျ ၊ ခေါငျးအုံးတှနေဲ့ဖိထားပွီး ခွတှေလေကျတှကေို တုပျနှောငျလိုကျကွတယျ။
ပွီးတော့ ခေါငျးဆောငျ မီယာနို ဟာ သိသမြှ ယောကျြား အပေါငျးအသငျးတှခေျေါလာပွီး ဂြှနျးကို ကို မုဒိမျးကငျြ့ခိုငျးတော့တယျ။
၁၁ လပိုငျး ၃၀ ရကျ....
ဂြှနျးကိုမိဘတှကေ ရဲစခနျးမှာ လူပြောကျတိုငျပွီး အပူတပွငျးလိုကျရှာနကွေပွီ...။
မီယာနိုနဲ့ အပေါငျးအပါတှဟော ဂြှနျးကိုရဲ့ မိဘတှကွေောငျ့ ရဲစခနျးက သူတို့အိမျကို လာရှာမှာကို စိုးရိမျလာတယျ။
သူတို့ ဂြှနျးကို ကိုအဝေးတဈနရောချေါသှားကွတယျ...။
"အမေ သမီး သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ရှိနတေယျ.. ဘာမှ စိတျမပူနဲ့နျော..အားလုံး အဆငျပွတေယျ...” ...လို့ အတငျးအကွပျစခေိုငျး ပွောဆိုစတေယျ။
အဲဒီအခြိနျ N ရဲ့မိခငျဟာ သားတှရေဲ့အခနျးကို သနျ့ရှငျ့ရေးလုပျရငျး မိနျးကလေး ဓမ်မတာလာရငျသုံးတဲ့ ပစ်စညျးတှတှေသှေ့ားတယျ..။
" ဟို ညကမိနျးကလေး ဒီနအေ့ထိရှိသေးတယျ ထငျတယျ.."
အဲဒီနေ့ ညက N ပွနျလာတော့ N ရဲ့မိခငျက " သား မိနျးကလေး ပွနျမပို့သေးဘူးလား..?
" ပို့လိုကျပွီ" N ရဲ့အမကေ မယုံလို့ နောကျတဈနတေ့ကျကွညျ့ပွနျတယျ။ ဂြှနျးကို ကို တှသှေ့ားတယျ..။
မီယာနိုဟာ ဂြှနျကို ကို N ရဲ့ရညျးစားယောငျဆောငျခိုငျးထားတယျ..။
N နဲ့သူမ ထမငျးအတူစားပွီး ဂိမျးကစားနကွေတယျ...။ မိဘတှကေိုယျတိုငျက N ကိုကွောကျရတယျ.. ဘာမှ မပွောရဲဘူး..။
ဘေးအခနျးက N ရဲ့အဈကိုကလညျး ဒါတှအေကုနျသိပမေဲ့ မသိခငျြယောငျဆောငျနခေဲ့တယျ။ N ရဲ့အဈကိုက သူ့ညီနဲ့အပေါငျးအပါတှကေို သလေောကျအောငျကွောကျတယျလေ..။
N ရဲ့အမဟော ဂြှနျးကို ဆီက ဖုနျးနံပါတျတောငျးပွီး ဂြှနျးကိုရဲ့ မိဘတှဆေီဖုနျးဆကျခဲ့တယျ။
" ဂြှနျးကိုဆိုတဲ့ မိနျးကလေး ရှိပါသလား..?"
"ဂြှနျးကို ဘယျမှာရှိလဲ သိရငျပွောပွပါရှငျ.."
N ရဲ့အမဟော ဖုနျးခပြဈလိုကျတယျ.. အခုတော့ သူရဲ့ သား N ဟာ ဂြှနျးကို ကို ပွနျပေးဆှဲထားပွီဆိုတာ ရိပျမိသှားပွီပေါ့...။
N ရဲ့အမဟော ဂြှနျးကို ကိုထှကျပွေးလို့ရအောငျ ကူညီခဲ့တယျ။
" ကလေးမ...ထှကျပွေး... ပွေး..."
ဂြှနျးကို တဈခါတညျး ထှကျပွေးတော့တယျ။
အိမျအောကျထပျ အထိပွေး လမျးပျေါလညျးရောကျရော... N နဲ့ N ရဲ့အဈကို နဲ့တနျးတိုးတော့တာပဲ...။
ဒီလိုနဲ့ ဂြှနျးကိုဟာ ကံဆိုးစှာနဲ့ ထပျအဖမျးခံရပွနျတယျ။
N ဟာ မိဘတှအေိပျတဲ့အထိ ဂြှနျးကို ကို အိမျအပွငျမှာ ဖမျးထားပွီး မိဘတှအေိပျတော့ တိတျတဆိတျ အိမျပျေါချေါတငျခဲ့ပွနျတယျ။
အဲဒီနကေ့ စပွီး ပိုဆိုးတော့တယျ........ျ။
သူတို့ ဂြှနျးကို ကို လူသားတဈယောကျလို မသတျမှတျကွတော့ဘူး။ မုဒိမျးကငျြ့ ရိုကျနှကျတာတှေ အရငျကထကျ ပွငျးထနျလာတော့တယျ။
ဂြှနျကိုဟာ တဈနေ့ ၁၈ နာရီ အဓမ်မကငျြ့ခံရတယျ...အနှိပျစကျခံရတယျ....။
"ကြှနျမကို အသကျရှငျခှငျ့ပေးပါ.. ကြှနျမ နာကငျြလှပါပွီ..."
ရဒေီယိုထဲက သူမ အကွိုကျဆုံး ဒရမျမာထဲက သီခငျြးမကွာခဏလာတယျ..။ အဲဒီသီခငျြးလာရငျ သူမ မကျြရညျတှနေဲ့ လိုကျဆိုမိတယျ...
" အားတငျးထား... အားတငျးထား..."
ပထမ သူမကို ဖမျးလာခဲ့တုနျးက သူမဆီမှာ နစေ့ားလုပျအားခ ယနျး ၃၀၀၀ ပါလာတယျ။
မီယာနိုနဲ့ အပေါငျးအပါတှဟော အဲဒီငှနေဲ့ စားကွသောကျကွ ... ဂြှနျးကို ကိုလညျး ထမငျးကြှေးကွတယျ...။ အဲဒီငှကေုနျသှားတော့ သူမကို မကြှေးမှေး ကွတော့ဘူး...။
N ရဲ့အဈကိုက လူလဈရငျ ဂြှနျးကို ကို စားစရာတှယေူလာပွီးကြှေးပမေဲ့ သူမ သိပျမစားနိုငျရှာတော့ဘူး။
သူမ သှားတှလေညျး ကြိုးကုနျပွီ.. အူ၊ အစာအိမျတှလေညျး ထိုးနှကျဒါဏျရာတှနေဲ့ အတှငျးကွေ ကွနေပွေီလေ...သူမ နှားနို့လောကျပဲ သောကျနိုငျတော့တယျ။
ဒီဇငျဘာလ လဆနျးပိုငျးမှာ သူမဟာ N ရဲ့အိမျက ထှကျပွေးဖို့ကွိုးစားပွနျတယျ။
ဒါပမေဲ့ သူမမှာ အကငြ်ျီက မရှိ ကိုယျတုံးလုံး....။ ဒီအိမျရောကျကတညျးက သူမ အကငြ်္ီ ဝတျခှငျ့ မရတာမြားတယျ...။
သူမဟာ အပွငျအထိထှကျဖို့ အခှငျ့မသာတော့ ရဲစခနျးကို ဖုနျးဆကျလိုကျတယျ။
"ရဲစခနျးကလား..? ကြှနျမကို ကယျပါ..".... မီယာနိုက N အိမျမှာရှိနတေယျ။
မီယာနို နိုးလာပွီး ဖုနျးကိုဆှဲလုလိုကျပွီး ဖုနျးခလြိုကျတယျ...။ရဲတှကေ ခကျြခငျြးဖုနျးပွနျဆကျတယျ။
မီယာနိုက " ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြး နောကျတာပါ.. " ...။ အသုံးမကတြဲ့ရဲတှကေလညျး ယုံခဲ့တယျ။
ဂြှနျးကို ပိုပွီး ကံဆိုးပွီ...။မီယာနိုတို့ အဖှဲ့ဒေါသကွီးကုနျကွပွီလေ...။
အားနညျးနတေဲ့ ဂြှနျကို ကို သူတို့ရှိသမြှအားတှနေဲ့ ရိုကျနှကျ လိုကျကွတယျ။
ရိုကျလို့အားမရ သူမ ခန်ဓာကိုယျပျေါတကျပွီး ခုနျကွတယျ။ အားမရတော့ အလေးတုံးတှနေဲ့ ပဈပေါကျကွတယျ။
ဝါးခွမျးပွားနဲ့ ရိုကျကွတယျ။ အားမရတဲ့အခါ ဂေါကျရိုကျတဲ့ အတံနဲ့ ရိုကျကွပွနျတယျ။
ဆေးလိပျမီးနဲ့ တို့ကွတယျ..။ ဆေးလိပျမီးနဲ့တို့တာ အားမရတော့ သူမ ခန်ဓာကိုယျကို မီးခွဈထဲထညျ့တဲ့ ဆီတှစှေတျပွီး မီးရှို့လိုကျတယျ။
မိနျးမငယျဂြှနျးကိုဟာ အရှငျလတျလတျ မီးရှို့ခံရလပွေီ...။
မီးလောငျဒါဏျရာက သှေးတှေ ပွညျတှထှေကျလာပွီး တဈကိုယျလုံးရှံစရာကောငျးလာတယျေ။ အဲဒီတော့ သူတို့ဟာ ပလပျစတဈလကျအိတျစှပျပွီး ဆကျရိုကျကွတယျ။
အစာကြှေးမယျ့အစား သူမကို စက်ကူခှကျထဲ မှာ ကငျြငယျရညျကို စှနျ့ခိုငျးပွီး ပွနျသောကျခိုငျးတယျ။ သူတို့ကငျြငယျရညျတှနေဲ့လညျး ပကျဖွနျးကွတယျ..၊
မိယာနိုနဲ့အပေါငျးအပါတှဟော ဂြှနျးကို အရှမှေ့ာ မိမိကိုယျကိုယျတဈကိုယျရညျအာသာဖွပွေီး ထှကျလာတဲ့ သုတျရညျတှကေို သူမပါးစပျထဲထညျ့ပွီး မွိုခခြိုငျးတယျ။
ဗိုကျဆာတယျဆိုရငျ သူမခန်ဓာကိုယျက ထှကျနတေဲ့ သှေးပုတျ ပွညျပုတျတှစေားခိုငျးတယျ..။ ဆေးလိပျတှေ တဈခါတညျးနဲ့ ၅ လိပျ တဈပွိုငျနကျသောကျခိုငျးတယျ...။ အရကျတှေ အတငျးတိုကျတယျ။
သူမ ဗိုကျဆာတယျ မပွောရဲတော့ဘူး။ နာကငျြလှနျးလို့ ဗိုကျလညျး မဆာနိုငျတော့ပါဘူး။
၁၂ လပိုငျး ၅ ရကျနေ့ တိုကြိုမှာ ရထားမီးလောငျမှုကွီးဖွဈတယျ။ လူတှအေမြားကွီးသတေယျ။
ဒုတိယခေါငျးဆောငျ အိုခုရာ က " ဂြှနျးကို သတငျးကွညျ့စမျး.. ရထားမီးလောငျတာ နငျ့အဖေ သပွေီတဲ့ .."
မိဘတှေ အသတျမခံရအောငျ ဒီလို သလေုမွောပါး အနဈနာခံနတေယျလို့ စိတျတဈခုထဲနဲ့ ဖွသေိမျ့နရေတဲ့ဂြှနျးကိုဟာ အလှနျပဲ ဝမျးနညျး ငိုကွှေးတော့တယျ။
ဒါကို သူတို့က သဘောကတြယျ...။ ပွီးတော့ ခဏအကွာ " ဟားဟား ငါတို့လြှောကျပွောတာ.. "
သူတို့ဟာ ဂြှနျးကို ကို တဈနတေ့ဈနေ့ ဘယျလို ရိုကျနှကျရမယျ...စိတျဆငျးရဲအောငျလုပျရမလဲလို့ပဲတှေးနကွေတာပေါ့..။
ဒီလိုနဲ့ ဂြှနျကိုဟာ လမျးတောငျမလြှောကျနိုငျတော့ဘူး။
" အိမျပွနျခငျြရငျ ငါတို့ကို က ပွ...။"
ဂြှနျးကိုက အားယူပွီး မရ ရ အောငျကုနျးရုနျး ထပွီး က ပွရှာတယျ....။ ဒါပမေဲ့ မတျတပျမရပျနိုငျ ပဈလဲသှားတော့ သူတို့အတှကျ ရယျစရာပေါ့...။
သူတို့ ၄ ယောကျဟာ ဂြှနျးကို ကို တဈနတေ့ဈမြိုး မရိုးနိုငျအောငျ ကွံစညျ နှိပျစကျတော့တယျ။
သူမရဲ့ မိနျးမအင်ျဂါနဲ့ အညဈအကွေးစှနျ့အင်ျဂါတှထေဲမှာ မီးပနျးတှတေပျပွီးမီးရှို့ကွ...အမှိုကျတှထေိုးထညျ့....တှေ့ သမြှ အခြှနျပစ်စညျးတှေ ထိုးထညျ့ ..နောကျဆုံး ပုလငျးတှေ ထိုးထညျ့ ပွီး ပုလငျးတှကှေဲတဲ့အထိ ဗိုကျပျေါတကျခုနျကွတယျ။
ပလာယာနဲ့ အသားတှကေို တဈစစီ ဆှဲဖွဲကွတယျ။
ကတျကွေး တှနေဲ့ထိုး၊ စတီးခြောငျးတှနေဲ့ရိုကျ... သူတို့ အကွံရသမြှ နညျးမြိုးစုံနဲ့ နှိပျစကျကွတယျ။
ပငျြးရငျ သူမ ကိုယျကို ထုတျတနျးမှာ တှဲလောငျးခပြွီး လကျဝှထေို့းကွသေးတယျ။
ဂြှနျးကိုဟာ အကွိမျ ၄၀၀ ထကျမနညျး မုဒိမျးကငျြ့ခံခဲ့ရပါ တယျ။ အခုတော့ ရှံစရာကောငျးနံစျောနတေဲ့ သှေးအလိမျးလိမျး မလှမပကွီးဖွဈနပွေီလေ...။
မုဒိမျးကငျြ့ဖို့ထကျ နှိပျစကျဖို့ပဲ အသုံးဝငျတာပေါ့...။
ဖူးရောငျနတေဲ့ မကျြနှာပျေါ ဖယောငျးစကျတှခေပြွနျတယျ...။
ဆောငျးရာသီကွီး ဝရနျတာမှာထုတျထား၊ အေးလားလို့ မေး... အေးတယျဖွရေငျ တဈကိုယျလုံး ဆီစှတျ မီးထပျရှို့...။
"ကြှနျမကို သတျပေးပါရှငျ.. တောငျးပနျပါတယျ.."
ဘဝကို အရှုံးပေးလိုကျပွီ...သူမ အသကျမရှငျလိုတော့ပွီ..။
မီယာနိုဟာ ဂြှနျးကို ကို ဒီလို အိမျထဲထညျ့နှိပျစကျတာကို လူ အယောကျ ၁၀၀ ကြျော သိနတေယျ။
ဒါပမေဲ့ ဘယျသူမှ ဘာမှ မပွောရဲဘူး။ သူမကို ကယျမယျ့သူ တဈယောကျမှ မရှိခဲ့ဘူး...။
၁၉၈၉ ခုနှဈ ၁ လပိုငျး ၄ ရကျ
မီယာနိုဟာ အပွငျမှာ ယနျး တဈသိနျးပြောကျသှားတယျ။ စိတျတိုတိုနဲ့ အပွဈမရှိတဲ့ ဂြှနျးကို ကို ရိုကျနှကျတယျ။
ဂြှနျးကိုဟာ သူမရဲ့ခါငျးနဲ့ ကကျဆကျ စပီကာနဲ့ ဆောငျ့ပွီး သတိလဈသှားတော့တယျ။
ဘာမှမတုနျ့ပွနျတဲ့သူမကို ၆ ကီလိုလေးတဲ့ အလေးမတုံးတှနေဲ့ ပဈပေါကျတယျ။ သူမက တုတျတုတျမှမလှုပျ...။
"ကောငျမ .. သရုပျဆောငျကောငျးလှခညျြလား..." ဆိုပွီး သူမကို မီးရှို့ပွနျတယျ။
သတိပွနျလညျလာတယျ။ နောကျထပျ ၂ နာရီခနျ့ ထပျရိုကျနှကျပွနျတယျ။ ဂြှနျကို သဆေုံးသှားတယျ။
သူမ N ရဲ့အိမျမှာ ငရဲကခြဲ့တာ အားလုံး ၄၄ ရကျပေါ့ ... အခုတော့ ငရဲသားဘဝက လှတျမွောကျခဲ့ရပွီလေ...။
၁၉၈၉ ခုနှဈ ၁ လပိုငျး ၅ ရကျ
သဆေုံးသှားတဲ့ ဂြှနျးကို ကိုကွညျ့ပွီး မီယာနိုနဲ့ အပေါငျးအပါတှဟော ရယျခငျြရကျ ပကျကြိဖွဈသှားကွတယျ။
သူတို့ဟာ တိုငျပငျမထားပဲ ပွိုငျတူ အျောဟဈရယျမောလိုကျကွတယျ။
ဂြှနျးကိုရဲ့အလောငျးကို စောငျနဲ့ပတျ၊ ခရီးဆောငျအိတျအထဲ ထညျ့၊ ပွီးတော့ အဲဒီအိတျကို ဘိလပျမွဖြေျောတဲ့ စညျပိုငျးထဲထညျ့ပွီး ဘိလပျမွတှေလေောငျးခပြဈလိုကျတယျ။
ပွီးတော့ တိုကြိုမွို့ လမျးဘေး တဈနရော နရောမှာသှားပဈထားလိုကျတယျ။
သူတို့အုပျစုဟာ အခွားမိနျးကလေးတဈယောကျကို အုပျစုလိုကျ မုဒိမျးကငျြ့မှုနဲ့ အဖမျးခံရပွနျတယျ။
ထောကျလှမျးရေးက "မငျးအရှယျ နဲ့ လူသတျ မုဒိမျးကငျြ့ အကုနျလုပျနတော မငျးကို ဒီအတိုငျးပဈထားလို့မရတော့ဘူး..." ..လို့ စိတျပကျြလကျပကျြပွောလိုကျတယျ။
"ဘာ! ဟိုကောငျတှသေစ်စာဖောကျပွီ... ဂြှနျးကို ကိုကြုပျတဈယောကျထဲသတျတာမဟုတျဘူးဗြ...!"
ထောကျလှမျးရေးက အတျောအံသွသှားတယျ။ ခကျြခငျြး အမူအရာမပကျြ ပွနျထိနျးပွီး..
"အေး ဘယျလိုသတျခဲ့လဲ ဖွောငျ့ခကျြပေး.. လိမျရငျ ပိုဆိုးမယျ..."
ထောကျလှမျးရေးတို့ အလောငျးကို စဈဆေးကွညျ့တော့... မကွညျ့ရဲလောကျအောငျ ရကျစကျထားတာတှရေ့တယျ။
ဂြှနျးကိုရဲ့ ရငျသားတှမှော အပျတှေ အမြားကွီးစိုကျထားတယျ။
သှားတှေ တဈခြောငျးမှမရှိတော့ ......
အစာအိမျထဲကို စဈဆေးကွညျ့တော့ အစားအစာတှအေစား ကငျြငယျရေ၊ သုတျရေ၊ ပိုးဟတျတှပေဲ ရှိနတေယျ။
မကျြနှာက အရိုးတှအေကုနျနီးပါး ကြိုးနတေယျ။ဆံပငျတှေ အကုနျကြှတျနတေယျ။
ဆရာဝနျက သူမဟာ မသခေငျက နားတှလေညျး ကနျးနခေဲ့တယျလို့ မှတျခကျြခတြယျ...။
ကိုယျ အလေးခြိနျ ၅၅ ကီလိုရှိခဲ့တဲ့ ကမျြးကမျြးမာမာ မိနျးမငယျလေးဟာ သဆေုံးသှားတဲ့အခါ ၃၅ ကီလိုပဲရှိခဲ့တယျ။
၁၉၉၀ ခုနှဈ ၇ လပိုငျး......
ခံပွငျးဖို့ကောငျးတာက ဒီလို လူသားတဈယောကျကို လူမဆနျ နှိပျစကျခဲ့တဲ့ သူတို့ ၄ ယောကျဟာ အသကျမပွညျ့သေးတဲ့အတှကျ.....
အသကျမပွညျ့ဆိုးသှမျးလူငယျ ဥပဒေ အရ (juvenile law ) ပွငျးထနျတဲ့ ထောငျဒါဏျပေးခွငျးမခံခဲ့ရဘူး။
၁။ မီယာနို - Hiroshi Miyano- ၂၀ နှဈ
၂။ N- Shinji Minato- ၅နှဈ မှ ၉ နှဈ
၃။ အိုဂုရ- Jo Ogura- ၈ နှဈ ( အခွား လူရိုကျမှု တဈမှုနဲ့ နှဈမှုပေါငျး အပွဈဒါဏျ)
၄။ ဝါတနဘဲ- Yasushi Watanabe- ၅ နှဈမှ ၇ နှဈ
....လို့ နောကျဆုံး အမွငျ့ဆုံးတရားရုံးက သတျမှတျလိုကျတယျ။ အခွားကြောငျးသား ၁၀ ယောကျလောကျကိုလညျး မုဒိမျးမှုနဲ့ အရေးယူခဲ့တယျ။
N မိဘတှကေတော့ ဂြှနျးကို ကို သူတို့ သား N ရဲ့ရညျးစားလို့ ထငျခဲ့ကွောငျး...။ ဒါပမေဲ့ လှတျမွောကျဖို့ ကူညီခဲ့ပွီး နောကျပိုငျး မသိခဲ့ပါဘူးလို့ အလြှောကျကောငျးခဲ့လို့ ထောငျထဲမဝငျခဲ့ရဘူး...။
တရားခှငျမှာ သူတို့ဖွောငျ့ခကျြပေးတိုငျး ကွားနာရပွီး မူးမလေဲ့ကသြှားခဲ့တဲ့ ဂပြနျပွညျသူတှအေတျောမြားမြားရှိခဲ့တယျ။
ငိုယိုကွတာတော့ မပွောနဲ့ ... တရားရုံးမှာ တကယျ့ငိုပှဲကွီးဖွဈခဲ့တယျ။
မီယာနိုလညျး နောကျဆုံး ထောငျထဲဝငျခါနီး ခွုံးပှဲခငြိုလိုကျတယျ...
" ကံမကောငျးလို့ အဖမျးခံရတာ.. အလောငျးကို ပငျလယျထဲပဈလိုကျရမှာ..ငါ ညံ့ခဲ့တယျ..."...တဲ့...။
အခုတော့ သူတို့ ၄ ယောကျလှတျလာပွီပေါ့...။
မီယာနို - Hiroshi Miyano
သူဟာ ထောငျကထှကျလာပွီး သူ့နာမညျကို Hiroshi Yokoyama လို့ပွောငျးလိုကျတယျ။
၂၀၁၃ ခုနှဈမှာ လိမျလညျမှုနဲ့ ထပျအဖမျးခံရပမေဲ့ သကျသအေထောကျ အထား မခိုငျလုံတော့ ပွနျလှတျလာတယျ။
မီယာနို မိဘတှဟော ဂြှနျးကို မိဘတှအေတှကျ အလှနျပဲ ဝမျးနညျးခဲ့တယျ။
သူတို့နတေဲ့ အိမျကိုရောငျးပွီး ယနျးပေါငျး သိနျး ၅၀၀ (USD 425,000) ပေးခဲ့တယျ။ ဂြှနျးကို မိဘတှကေ လကျမခံခဲ့ပါဘူး။
ထပျကာထပျကာ တောငျးပနျလိုကျ ငှပေို့ဖို့ကွိုးစားလိုကျ လုပျနခေဲ့တယျ။
ဂြှနျးကိုရဲ့မိခငျကွီးကတော့ စိတ်တဇဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံနရေဆဲ....။ နကေောငျးလိုကျ မကောငျးလိုကျပါပဲ...။
သူက မီယာနိုထကျ ငယျတယျ။ ထောငျကတြော့ ၁၆ နှဈပဲရှိသေးတယျ။ သူ့မိဘတှဟော အဲဒီမွို့မှာ မနရေဲတော့လို့ အခွားမွို့ကို ပွောငျးသှားကွတယျ။
သူဟာ ထောငျကထှကျလာပွီး ရိုမေးနီးယား အမြိုးသမီး (Romanian woman) နဲ့အိမျထောငျကခြဲ့တယျ။
သူကတော့ ၁၉၉၉ ခုနှဈ သွဂုတျလမှာ ထောငျကထှကျလာပွီး သူ့နာမညျကို Jō Kamisaku လို့ပွောငျးလိုကျတယျ။
သူဟာ ၂၀၀၄ ခုနှဈမှာ Takatoshi Isono ဆိုတဲ့သူကို သူ့ရညျးစားနဲ့ အထငျလှဲပွီး ၄ နာရီလုံးလုံး ရိုကျနှကျထိုးကွိတျတဲ့အမှုနဲ့ ထောငျ ၇ နှဈထပျကတြယျ။
"ငါ ... လူသတျဖူးတယျကှ! မငျးကို ဘယျလိုသတျပဈရမလဲဆိုတာ မခကျဘူး "..လို့ပွောခဲ့သေးတယျ။
တရုတျ အမြိုးသမီးတဈယောကျ နဲ့ လကျထပျဖို့ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ မအောငျမွငျခဲ့ဘူး။
သူ့မိဘတှကေတော့ သူ့သားဘဝပကျြတာ ဂြှနျးကိုကွောငျ့ ဆိုပွီး ဂြှနျးကိုရဲ့ အုတျဂူ ကို သှားရောကျ ဖကျြဆီးခဲ့သေးတယျ။
သူကတော့ ထောငျထဲကထှကျလာပွီး လူကွောကျတဲ့ စိတျဝဒေနာခံစားရတော့တယျ။
တဈခါတဈရံ ဘဝမှာ မထငျမှတျတာတှေ အခြိနျမရှေးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ အဲဒါ ကောငျးတာတှလေညျးဖွဈနိုငျသလို ဆိုးတာတှလေညျးဖွဈနိုငျတယျ...။
"ကှနျကရဈ စညျပိုငျးထဲ နဈမွုတျနတေဲ့ အထကျတနျးကြောငျးသူလေး " ဆိုတဲ့ သတငျးဆိုးဟာ ကမ္ဘာကို တုနျလှုပျစခေဲ့တဲ့ ....သိပျဝမျးနညျးဖို့ကောငျးတဲ့ ဖွဈရပျမှနျတဈခုဖွဈပါတယျ....။
ကြှနျမတို့ မသိသေးတဲ့ လောကကွီးထဲက တဈခြို့သော လူတှမှော မတ်ေတာဆိုတာ မရှိ လောကျအောငျ ခေါငျးပါးနတေယျ။ သူတို့ဟာ သငျ့နံဘေးမှာထိုငျနတေဲ့သူလညျး ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျတယျ။
ကိုယျကကောငျးပမေဲ့ ခေါငျးရှခေဲ့ရတဲ့အဖွဈတှေ လောကကွီးထဲမှာ ဆကျတိုကျဖွဈနဆေဲ....,။
မိမိ ဘယျလောကျပဲ ကောငျးအောငျ မှနျအောငျနပေါစေ....လူယုတျမာတှလေကျထဲရောကျသှားတတျတဲ့ ကံဆိုးတဲ့သူတှရှေိနတေတျတယျဆိုတာ ဂြှနျးကိုရဲ့ အဖွဈဆိုးက သကျသပေါပဲ....။
လူယုတျမာတှဟော သူတို့ ရဲ့ ကိုယျ၊ စိတျ ခမျြးသာဖို့ သားကောငျတှေ အမွဲရှာနလေရှေိ့တယျ....။
ဒီလိုအဖွဈဆိုးမြိုးကို အခြိနျပိုငျးအလုပျလုပျပွီး စကျဘီးနဲ့အိမျပွနျလာခြိနျမှာလဲကွုံတှနေို့ငျတယျ။
အိမျထဲမှာအိပျနရေငျးလညျး ကွုံတှနေို့ငျတယျ။ ဒါကွောငျ့ အမွဲ သတိရှိရပါမယျ..။
ကံ ကံ၏ အကြိုးကို ယုံကွညျပွီး ဝဋ်ဋျကွှေးဆိုတာကွောငျ့ ဒီလိုခံစားရတယျလို့ ယုံကွညျတဲ့သူတှရှေိရငျ ဒီဘဝမှာ ကုသိုလျကောငျးမှုတှေ တတျနိုငျသလောကျ မြားမြား ပွုလုပျနိုငျပါမှ... လို့ မိမိကိုယျမိမိ သတိပေးနိုငျပါမှ...။
ဒါမှ ကောငျးတဲ့အကြိုးပေးမှုတှေ မြားလာပွီး ဒီလို ဝဋ်ဋျကွှေး အဖွဈဆိုးကွီးတှဟော တဖွညျးဖွညျး မှေးမှိနျသှားနိုငျသလို ၊ နောကျဆုတျ အခြိနျဆှဲထားနိုငျမှာဖွဈတယျ။
၁၉၈၉ ခုနှဈ ၄ လပိုငျး ၂ ရကျနမှေ့ာ သူမရဲ့အလောငျးကို မွမွှေုတျသဂွိုင်ျဟျလိုကျပါတယျ။
သူမဟာ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ နဲ့ ပြျောရှငျစိတျလှုပျရှားခဲ့ဖူးတယျ။
သူမ အဖမျးခံခဲ့ရတဲ့ ညက သူမ သိပျမြှျောလငျ့ခဲ့တဲ့ ဂပြနျ အခနျးဆကျ ဒရမျမာ ဘယျလိုအဆုံးသတျလမေလဲ....?
သူမဟာ ကိတျမုနျ့ဖုတျတာ အရမျးဝါသနာပါခဲ့တယျ။
ဒီဇငျဘာလ ၂၅ ရကျ ခရဈစမတျမှာ မိခငျနဲ့ ကိတျမုနျ့ဖုတျဖို့ အစီအစဉျတှဆှေဲထားကွတာ....။
" အမေ အံ့သွသှားမယျ.. သမီးမှာ အကုနျ စဉျးစားထားပွီးသား..."....စိတျကူးယဉျ ခရဈစမတျ ကိတျလေးလညျး မလုပျဖွဈနိုငျခဲ့...။
ခမျြးအေးလှတဲ့ ဆောငျးရာသီမှာ အကငြ်္ီမပါ ကိုယျလုံးတီးနဲ့ ယောကျြားတှေ အာသာပွေ နပွေခဲ့ရရှာတယျ...။
၁၉၈၉ ခုနှဈ နှဈသဈကူးနေ့....သူမြားတှေ ပြျောနတေဲ့အခြိနျ သူမမှာတော့ ဘယျသူက ဘယျလို လာနှိပျစကျမလဲ ..? မုဒိမျးပဲအကငျြ့ခံရမလား...မီးပဲအရှို့ခံရမလား.. ကွောကျရှံ့တုနျလှုပျနခေဲ့ရတယျ။
ဂြှနျးကို ဟာ ၁၉၇၁ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ ၁၈ ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့သူဖွဈတယျ။ သူမ ဟာ ၁၉၈၉ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ ၁၄ ရကျ မှာသဆေုံးခဲ့တယျ။
သူမအရမျးမြှျောလငျ့ စိတျကူးယဉျခဲ့တဲ့ ၁၈ နှဈမွောကျ မှေးနေ့ မရောကျမှီ ၄ ရကျအလိုမှာ လောကကွီးက နာကငျြစှာနဲ့ ထှကျခှာခဲ့ရတယျ။
ကြောငျးဆငျးပွီး ည ၈ နာရီ ၃၀ မိနဈအထိဘာလို့ အခြိနျပိုငျးလုပျခဲ့တာလဲဆိုတာ သိလိုကျရတဲ့သူတှေ မကျြရညျ အလိုလိုစီးကလြာခဲ့ရတယျ...။
ဂပြနျနိုငျငံတို့ ကိုရီးယားနိုငျငံမှာ အထကျတနျးကြောငျးပွီးသှားရငျ ဘဝရဲ့ ပထမခွလှေမျး ပွီးဆုံးတဲ့ အထိမျးအမှတျနဲ့ ခရီးထှကျကွတယျ။ အဲဒါကို High School Graduation Trips လို့ချေါတယျ။
သူမ အထကျတနျးနောကျဆုံးနှဈမို့ စာမေးပှဲပွီးရငျခရီးထှကျဖို့ ပိုကျဆံစုနတောဖွဈတယျ။ သူမ မိဘတှကေ အကုနျအကခြံပွီး လကျဆောငျအနနေဲ့ ခရီးထှကျဖို့ငှကေို ပေးမယျဆိုပမေယျ့ မခမျြးသာတဲ့ မိဘတှေ ပငျပငျပနျးပနျးအလုပျလုပျရမှာကို သူမ မလိုလားခဲ့.....။
အခုတော့ သူမ အကွာကွီးစောငျ့စားခဲ့ရတဲ့ စိတျလှုပျရှားစရာ နိုငျငံခွား ခရီးတဈခုခုကိုလညျး မသှားခဲ့ရတော့....။
နောကျဆုံး ဒီလို အရှငျလတျလတျ ငရဲကခြံဖို့ လိုကျသှားခဲ့တာလညျး "နငျ့မိသားစုကို သတျပဈမယျ..." ဆိုတာကို ကွောကျလှနျးလို့....။
သူမရဲ့အုတျဂူ နံဘေးမှာ သူငယျခငျြးတှရေေးထားတဲ့ ကြောကျစာလေး ဒီနအေ့ထိရှိနတေယျ။
ငါတို့ နငျ့ကို ဒီလိုပွနျတှရေ့မယျလို့ အိပျမကျတောငျ မမကျဖူးခဲ့ပါဘူး...။နငျ တျောတျော နာကငျြ ခံစားခဲ့ရမှာပဲနျော....။
ဒါနဲ့....ဒီနှဈ happi (法被, 半被) ရိုးရာ ပှဲတျောမှာ နငျမရှိတော့ပမေဲ့ ငါတို့ နငျ့အစား အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ လုပျကွမယျ...။
ငါတို့ နငျ့ကိုဘယျတော့မှ မမဘေူ့း..သိလား..။
ကြောငျးအုပျဆရာကွီးက နငျ့ကို အောငျလကျမှတျပေးမယျတဲ့ဟ...။ ငါတို့ အားလုံး အထကျတနျး အတူတူအောငျကွပွီပေါ့ဟာ...။
နငျရောကျနတေဲ့နရောမှာ နာကငျြမှုတှလေညျးမရှိ ဝဒေနာခံစားမှုတှလေညျးမရှိတော့တာမို့ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူနနေျော...သူငယျခငျြး...။
ဂြှနျးကိုရဲ့မိဘတှဟော ဂပြနျပွညျမှာ ဒီလို ယုတျမာ ရိုငျးစိုငျးတဲ့ ဆယျကြျောသကျတှရှေိနတော ပွညျသူ ပွညျသားတှေ သတိထားနိုငျဖို့ ဒီ သတငျးဆောငျးပါးကို ရုပျရှငျရိုကျပွီး ရုံတငျပွသဖို့ ခှငျ့ပွုခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို ခှငျ့ပွုခဲ့ပမေယျ့ ဒီရုပျရှငျကွောငျ့ သူတို့ ပိုပွီး ဝမျးနညျးရလို့ ပွနျလညျရုပျသိမျးခဲ့ကွတယျ။
( မွနျမာပွညျက မောငျနှမတဈခြို့ တောငျးဆိုထားလို့ ဘာသာပွနျပေးလိုကျပါတယျ..။)